ရခိုင်ပြည်နယ် အကြမ်းဖက်မှု ဖမ်းဆီးထားသူ ကလေးသူငယ် ၆ ဦးရှိ၊ ၁ ဦး အစာအိမ်ရောင်ပြီး သေဆုံး | MCN (MYANMAR CHANNEL NEWS)
Home သတင်း ပြည်တွင်းသတင်း ရခိုင်ပြည်နယ် အကြမ်းဖက်မှု ဖမ်းဆီးထားသူ ကလေးသူငယ် ၆ ဦးရှိ၊ ၁ ဦး အစာအိမ်ရောင်ပြီး သေဆုံး
epa05883480 A picture made available on 01 April 2017 shows Police vehicles drive pass on the street in Kyee Ken Pyin village, near Maungdaw town of Bangladesh-Myanmar border, Rakhine State, western Myanmar, 30 March 2017. The UN estimates 30,000 people, most of whom call themselves Rohingya and ethnic Rakhine, have fled their homes from the locked-down area of Maungdaw, since three co-ordinated attacks on police posts by unknown assailants sparked more violent conflicts in October. The resurgence in violence has seen 90 people killed and close to 600 arrests, according to the Myanmar government. EPA/NYEIN CHAN NAING
ရခိုင်ပြည်နယ် အကြမ်းဖက်မှု ဖမ်းဆီးထားသူ ကလေးသူငယ် ၆ ဦးရှိ၊ ၁ ဦး အစာအိမ်ရောင်ပြီး သေဆုံး
ရခိုင်ပြည်နယ်မှာ နယ်ခြားစောင့် ရဲတပ်ဖွဲ့ အကြမ်းဖက် တိုက်ခိုက်ခံရမှုနဲ့ ဆက်စပ်ပြီး အသက် ၁၆ နှစ်အောက် ကလေးသူငယ် တရားခံ ၆ ဦးရှိပြီး ၁ ဦးက အစာအိမ်ရောင် ရောဂါနဲ့ သေဆုံးသွားခဲ့ပါတယ်။
သတင်းဓာတ်ပုံ – (NYEIN CHAN NAING/EPA)
ကလေးသူငယ် တရားခံ ၆ ဦးကို မောင်တောမြို့နယ် တရားသူကြီးရဲ့ ထိန်းသိမ်းခွင့်နဲ့ ဘူးသီးတောင်မြို့နယ် အမှတ် (၃) နယ်ခြားစောင့် ရဲတပ်ဖွဲ့ခွဲမှာ ကလေးသူငယ်ဆိုင်ရာ အခွင့်အရေးနဲ့ အညီ ထိန်းသိမ်းထားတယ်လို့ နိုင်ငံတော် အတိုင်ပင်ခံရုံးက သတင်းထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။
အဲဒီ ၆ ဦးအနက် မာမတ်ရော်ဖီး (၁၅ နှစ်) ဆိုသူဟာ အစာအိမ်ရောင် ရောဂါကြောင့် ဆေးရုံ ၂ ကြိမ် တက်ခဲ့ရပြီး ဖေဖော်ဝါရီလထဲမှာ သေဆုံးခဲ့တာ ဖြစ်ပါတယ်။
ကျန် ကလေးသူငယ်တွေကတော့ နိုဆီမူလ္လာ (၁၃ နှစ်) အဏ္ဏဝါ (၁၃ နှစ်)၊ ယာဆိမ်း (၁၃ နှစ်)၊ ဖဲလ်တူး (၁၄ နှစ်)နဲ့ ဇာဖော့အာလောင် (၁၅ နှစ်) တို့ ဖြစ်ကြပါတယ်။ သူတို့ ၅ ဦးကို ဘူးသီးတောင်မြို့နယ် ကလေးသူငယ်တရားရုံးမှာ ကလေးသူငယ် တရားသူကြီး ဦးဘသောင်းက ပွင့်လင်းမြင်သာစွာ အမှု စစ်ဆေးနေတယ်လို့ နိုင်ငံတော် အတိုင်ပင်ခံရုံး ထုတ်ပြန်ချက်မှာ ဖော်ပြထားပါတယ်။
Previous articleMCN နေ့စဉ် ရုပ်သံသတင်းအစီအစဉ် ၂၀၁၇ ခုနှစ်၊ ဇွန် ၅ ရက် တနင်္လာနေ့
Next articleလက်နက်တွေနဲ့ ဖမ်းမိတဲ့ ထိုင်းလေတပ် တပ်ကြပ် လက်နက်ကုန်ကူးဖို့ ဖြစ်ကြောင်း ဝန်ခံ